ရုပ်ချောတဲ့ ကာယဗလမယ်လေးတွေ အဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်လီ( ၅) ယောက် – Burmese.asia
Homepage / LifeStyle / ရုပ်ချောတဲ့ ကာယဗလမယ်လေးတွေ အဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်လီ( ၅) ယောက်
By mzhPosted on July 27, 2020
အရင်တုန်းက တော့ ယောက်ျားလေးဆိုရင် ဗလာ တောင့်တောင့်နဲ့ မှ ကြည့်ကောင်းတယ်၊ မိန်းက လေး ဆိုရင် မိန်း က လေး ဆန် ဆန် ပျော့ ပျော့ နွဲ့ နွဲ့ Body ကိုယ် နေဟန် ထား ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ် ချက်တွေ ရှိခဲ့ ဖူး ပါတယ်။ ဒီ နေ့ ခေတ်မှာတော့ အရင် က မတူ တော့ပါဘူး။ဗလာ တောင့်တောင့်နဲ့ ကျန်းမာသန် စွမ်းတဲ့ Body မျိုး ကို ခုံ မင် မက် မော တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ တစ်နေ့ တခြား ပိုများလာပါပြီ။ချော လည်း ချော ဗလ လည်း တောင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကို တော့ စာဖတ်သူတွေ အတွက် ဝေမျှ ပေးချင်ပါတယ်။သူတို့ ကတော့
1st show of 2020 is done and dusted witha1st place. Thank you @carole_ifbbaustralia for this amazing show-Sunshine Coast classic. It was suchamixed feeling stepping on stage again. Love every moment of it. I’m certain this is where I belong. I haveabig goal and dream to pursue. This is just the beginning of it. Thank you coach @ifbbjudgedre love you so much. Thank you @sv_bikini for this stunning suit!! It’samasterpiece as always. . . . #lara殿 #lara368 #ifbb #ifbbproud #ifbbelite #ifbbelitepro #ifbbbikini #ifbbbikinifitness #ifbbaustralia#ifbbqld#bodybuilding #champion #bikini #bikinigirl #fit #fitness #fitgirl #bikinicompetitor #elegant #glutes #xshape #booty #ifbbbikinifitness #australasia2020#quarterturns#europeanstyle
A post shared by Lara Zhang (@lara368zhang) on Mar 22, 2020 at 2:31am PDT
သူ မက တော့ သြစ တြေးလျ အ ခြေစိုက် တရုတ် ကာယဗလ မယ်တစ်ယောက်ပါ။ဘယ်လို က နေ စပြီး အွန် လိုင်း ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးလာလဲဆိုရင်ေ တာ့ နာမည်ဆိုးနဲ့ စ နာမည်ကြီးတာလို့ ပြော လို့ရပါတယ်။ဒီအ ကြောင်းကို တော့ nextshark မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Weibo မှာ သူမရဲ့ က ယ ဗလ မယ် ပြိုင် ပွဲ မှာ ၀င်ပြိုင်တဲ့ အခါ ပြတဲ့ Pose တွေ ကို ဗီဒီယိုဖိုင် ရိုက် တင် ခဲ့တာပါ။ဒါ ပေမယ့် တရုတ် ဆိုက် ဘာ ရဲ တပ် ဖွဲ့ က နေ sexy ကျ လွန်းပြီး ညစ်ညမ်း တယ်လို့ ပြော ဆို ဝေဖန်ခံရာ က နေ နာမည်ကြီး လာခဲ့တာပါ။သူမက တော့ ယုံကြည်ရာ ကို လက် မ လျှော့ ပဲ ဆက် လျှောက် လှမ်း နေပါတယ်။
#你当温柔却有力量 #lara殿 #lara368 #ifbb #ifbbbikini #bikinicompetitor #fitgirl #fitness #fitnessmotivation #fitnessmodel #fitnessphysique
A post shared by Lara Zhang (@lara368zhang) on Jan 2, 2019 at 7:45pm PST
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး ကာယဗလမယ် တစ်ယောက်ပါ။Jhi Yeon-woo က တော့ IFBB PRO ကိုရီးယား အမျိုးသမီး ကာယ ဗလမယ်ပါ။အားကစားလောကမှာ တော့ အရမ်း နာမည်ကြီးပြီး ဆု တွေ လည်း ရဖူးပါတယ်။(၂၀၁၃)ခုနှစ်တုန်းက 2013 Arnold Classic Europe အမျိုးသမီးကာယဗလမယ် ပြိုင်ပွဲမှာ ဆု ရခဲ့ ဖူးပါတယ်။April 26, 1984 မှာ မွေးပြီး သူမရဲ့ အသက်က တော့ အခုဆိုရင် (၃၆)နှစ်ပါ။ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့် ဖွင့်ထားပြီး ကိုယ်ကာယ ကြံ့ ခိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Post တွေ အများဆုံး တင်ဖြစ် ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက် ကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေါ်မှာ အရမ်း နာမည်ကြီးတဲ့ ကာယ ဗလမယ် အ ချော လေး ပါ။သူမ က တော့ ဘာဘီအရုပ်မ လေးလို မျက်နှာ နဲ့ ဗလာ ကြီးကြီးတွေ ပေါင်း စပ်ထားတဲ့ အ ချော လေးပါ။Julia Vins က တော့ ရုရှားကာယဗလမယ်ပါ။May 21, 1996 မှာ မွေးပြီး အသက်က တော့ (၂၄)နှစ်ပဲ ရှိပါ သေးတယ်။Muscle Barbie ဆိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ သူမက တော့ ကာယဗလ မောင် ယောက်ျားကြီး တစ်ချို့ အတွက် တောင် ခက်ခဲ တဲ့ အ လေး တွေကို အသာ လေး မ ပြ နိုင်တဲ့ အထိ ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူလေးပါ။
An da jeong က တော့ ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး ကာယဗလမယ် တွေ ထဲက တစ်ယောက်ပါ။သူ က တေ့ာ ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ အ တော်ဆုံး ကာယဗလမယ် တွေ ထဲက တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ် ခံထား ရသူပါ။(၁၉၈၈)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၇)မှာ မွေးခဲ့တာပါ။ကိုရီးယားနိုင်ငံ မဟုတ်တဲ့ တခြားကို နှစ် အ တော်ကြာ ထွက် သွားခဲ့ ပြီး နောက် မှာ တော့ Fitness လောကထဲ ၀င်လာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက်ရခဲ့တာပါ။2018 IFBB Romania Muscle Fest Pro ပွဲမှာလည်း နိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေါ်မှာလည်း နာမည်ကြီးပြီး ကိုရီးယား အ တော်ဆုံး အမျိုးသမီး အားကစားသမားထဲက တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။
Yuan Herong က တော့ တရုတ်က ပါ။သူမက တော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေါ်မှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီး ပါတယ်။သူမ အ ကြောင်းကို တော့ fitnessvolt မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။အရင် တုန်းက ကာယဗလမယ် တစ်ယောက် ပါ။ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Fitness လောက ကို စွန့် ခွာ ပြီး တရုတ်တိုင်းရင်ဆေး ဆရာမ လေး ဘ၀ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါ တယ်။ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ Body ကျန်းမာ ကြံ့ ခိုင် ရေး အတွက် အားကစားကို လက်မလွှတ်သေးတာ ကြောင့် ကျန်း မာပြီး ကြွက်သား အပြည့်နဲ့ Body ကို ပိုင် ဆိုင် ထားတာပါ။
တစ်ဖက်မှာ ဆရာဝန်လည်း လုပ် တစ်ဖက်မှာ မော်ဒယ် လုပ်ရတာကို သ ဘောကျ တယ်လို့ သူမက ပြော ဖူးပါတယ်။အရင် ကေ တာ့ ကိုယ်ပိုင် Instagram အ ကောင့်ဖွင့် ထားပြီး ပုံတွေ အများကြီး တင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုတော့ အ ကောင့်က ပျက်တာလား၊သူမကိုယ်တိုင်ပဲ Delete လုပ် လိုက်တာ လား မသိရပဲ အ ကောင့် မရှိတော့ပါဘူး။
အသက် (၂၄)နှစ်အရွယ်မှာ Lamborghini ကားသစ်ကြီး ၀ယ်နိုင်လိုက်တဲ့ စင်ကာပူ Influencer မ လေး
လစာကောင်းတဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာ ဘဝကို စွန့်လွှတ်ပြီး လယ်သမားဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့သူ
Previous post ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ဖို့ရန် မြန်မာ ပြင်ဆင်
Next post လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၇၀) က ဂျပန်ရေတပ်ရဲ့ ခြေဖျားတောင် မမှီဘဲ လေကျယ်နေတဲ့ တရုတ်
ပြည်နယ် ၃ ခု နှင့် တိုင်း ၁ ခုတို့တွင် တံတား ၁၀၁ စင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်တော့မည်
ပြည်နယ် ၃ ခု နှင့် တိုင်း ၁ ခုတို့တွင် တ…